Qaalawiinsa gatii hoteelaatiin Finfinneen Afrikaa keessatti sad. 1ffaa irratti argamti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Qaalawiinsa gatii hoteelaatiin Finfinneen Afrikaa keessatti sad. 1ffaa irratti argamti
Gatiin kutaa hirribaa hoteelota Finfinnee isaan magaalota Afrikaa biraan yoo wolbira qabamu hundarra hedduu qaalii ta’uun gabaafame. Akka gabaasa STR, dhaabbata qorannoo hoteelaa, kutaa hirribaa halkan tokkoof hoteelota Finfinnee keessatti qabachuun baasii guddaaf nama saaxila.
Baatii dabran 6 keessatti gatiin hoteelota Finfinnee (kanniin urjii 5) halkan tokkoof jiddu galeessatti $232 dha. Egaa baasii kana kan Finfinnee muummee magaalota hoteela qaalii irra kan teessise.
Gatiin kutaa hirribaa hoteelota magaalota Afrikaa gurguddoo isa Finfinneen yoo wolbira qabamu addaaddummaa guddaa qaba. Bifuma kanaan kutaan hirribaa halkan tokkoof magaalaa Leegos $216, Naayiroobii $145, Keeppi Taawun $122, Kazablaankaa $106, Kaayiroo %104, Johaansbarg $73 fi Shaarm al Sheerk $71 dha.
Gatiin hoteelota Finfinnee akkas qaalawuuf akka sababaatti kan qubni itti qabame hir’inni ykn hanqinni hoteelota sadarkaa ol’aanaa bal’inaan jiraachuu isaati.
Gatiin kutaa hirribaa hoteelota Finfinnee yeroo woggaa tokkoo keessatti %15 dabaleeti kan argame.
Kuni hundi ta’aa kan jiru, akka Global Financial Magazine itti, biyya addunyaa irratti hiyyeeyyii jedhaman keessaa takka keessatti.
Previous articleAtleet Maaree Dibaabaa fiigicha maaratoonii moo’atte
Next articleMuslimoonni Itoophiyaa tajaajila baankii dhala-maleessaa argachaa jiran